आर्थिक समृद्धिको निरन्तर बहस | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय आर्थिक समृद्धिको निरन्तर बहस
सम्पादकीय2views
आर्थिक समृद्धिको निरन्तर बहस
Latest posts by (अस) (see all)
आपूर्ति मन्त्रालयले गराएको अध्ययन : १० वर्षमा खाद्यवस्तुको मूल्य २५% बढ्ने प्रक्षेपण -
आइतवार, १७ मङ्सिर २०७४ -
शुक्रवार, १५ मङ्सिर २०७४ -
निजीक्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक नेता तथा व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबैको साझा एजेण्डा आर्थिक विकास नै हुनुपर्ने भनाइ राखे । ‘अबको सङ्कल्प : आर्थिक समृद्धि’ नारासहितको कार्यक्रमका केही वक्ताले विकास राजनीतिक भाषण वा गफले भन्दा पनि धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गरेर मात्र सम्भव हुने बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन, राजनीतिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने पनि ती वक्ताको भनाइ थियो । यसबाट आर्थिक विकासमा देखापरेको समस्या के हो भन्ने हाम्रा अधिकांश दलका नेताहरूलाई जानकारी भएको स्पष्ट हुन्छ । तर, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ उनीहरूले बताउन सकेका छैनन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै यही हो ।
दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक एजेण्डालाई निर्वाचनपश्चात् कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धतासमेत वक्ताले व्यक्त गरे । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा यथास्थितिभन्दा माथि उठेर आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताए । तर, उनीहरूले भाषणमा भनेजस्तो घोषणापत्रमा प्रभावकारी योजना उल्लेख नै छैन । त्यो नभई निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
उदाहरणका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रविधिको सहयोगले तीव्र आर्थिक विकास गर्ने बताए । तर, उनको दलको घोषणापत्रमा प्रविधिको प्रयोगबारे सर्सती लेखिएको मात्र छ, ठोस योजना छैन । त्यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबाट मुक्त भए विकास हुन्छ भने । तर, उनको दलको घोषणापत्रमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट कसरी अलग्याउने हो, त्यसको कुनै स्पष्ट योजना छैन । घोषणापत्रमा लेखिएका कतिपय कुरा हावादारी भएको पनि सहभागीमध्येकै एक दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ । अर्को दलका प्रतिनिधिले त्यसैलाई सम्भव छ पनि भनिरहेका छन् । वास्तवमा यस संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । तर, सम्भव कसरी गराउने भन्नेचाहिँ योजनामा स्पष्ट हुनुपर्ने हो । सबैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा त्यो छैन ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीचाहिँ उद्योगमैत्री नीति चाहियो भनिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू त्यस्तो नीति आइसकेको कुरा गर्छन् । यसले राजनीतिक दल, सरकार र उद्योगीबीच साझा समस्याका बारेमा अझै पनि एकमत हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । त्यस्ता विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन भने फेरि पनि आर्थिक बहसको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । छलफलका लागि मात्र छलफल भएर कुनै उपलब्धि हुँदैन । यस्ता बहस बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । तर, बहस भएअनुसार उपलब्धि भएन भने बहस गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योगीव्यवसायीले पनि कुनै ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू आर्थिक विकासका लागि आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरिरहेको कुरा गर्छन् । तर, के गरिरहेका छन् त ? त्यो स्पष्ट रूपमा भन्न सकेका छैनन् । उनीहरूले भनेको उद्योगमैत्री नीति कस्तो हो ? त्यो पनि स्पष्ट छैन । नेताहरू विद्यमान नीति पनि उद्योगमैत्री नै रहेको र त्यसमा आवश्यक सुधार गर्दै जाने पनि भन्दै छन् । यस्तो अल्झाउने कुराले मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन ।
उद्योगव्यवसायीले पनि केकस्तो नीति चाहिएको हो स्पष्ट पार्नुपर्छ र मुलुकको आर्थिक विकासमा सक्रिय हुनुपर्छ । विद्यमान नीतिनियम परिमार्जन र खारेजीका लागि उद्योग परसङ्घ र चेम्बरले एउटा अभियानको शुरुआत पनि गरिसकेका छन् । त्यसमा निजीक्षेत्रका सबै सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि पनि संलग्न हुनुपर्छ र त्यो अभियानलाई पूर्ण र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनिमात्र यस्ता बहसबाट ठोस परिणाम निस्कन्छ ।
११ बैशाख २०७५, मंगलवार ०५:४९
‘ब्लेण्डेड फाइनान्स’ कार्यदलको आवश्यकता
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०५:५५
आशा लघुवित्तको नाफा ४ लाख
साङ्ग्रिलाको ११.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
प्राइम कमर्शियलको नाफा १ अर्ब २५ करोड
पोखराको जगेडा ९७ प्रतिशत बढ्यो
नेपाल सेवा लघुवित्तको १ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ बुधवारदेखि
उतारचढावको क्रममा नेप्से १४ सय विन्दु तल पुगेर बन्द
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने, आँखाको लेन्स उत्पादन गर्न तिलगङ्गालाई १० करोड
लुम्बिनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब १४ करोड
लक्ष्मी बैङ्कको नाफामा ४१% वृद्धि हुँदा प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३.६४